“Messi ayaa sabab u ah in Barcelona aysan ku guuleysan Champions League” – Louis van Gaal – Gool FM
(Yurub) 25 Juunyo 2019.Tababaraha reer Holand ee Louis van Gaal ayaa ku eedeeyay Lionel Messi inuu yahay mid ka mid ah sababaha ka danbeeysa in kooxda Barcelona ay ku guuldareysato tartanka Champions League.
Louis van Gaal ayaa wareysi uu la yeeshay Wargeyska “El País” ee dalka Spain wuxuu ka jawaabay su’aalo badan, mid ka mid ah su’aalihii la weydiiyay waxay ku saabsaneyd doorka ciyaartoyda iyo sida ay shaqsiyadooda ugu caawin karaan kooxdooda inay guul gaarto.
Louis van Gaal ayaa tusaale ahaan u soo qaatay kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Bal fiiri Barcelona, in koob ee ah tartanka Champions League ay ku guuleysteen inkastoo la sheego inay heystaan ciyaaryahanka ugu fiican adduunka, si la mid ah fiiri Neymar iyo Paris Saint-Germain”.
“Neymar iyo Messi waa laba ciyaaryahan oo aan shaqsiyadooda jeclahay, ee uma jecli ciyaartooy koox ahaaneed, in loo ciyaaro si wadajir ah ma jirto wax ka fiican inaad noqoto ciyaaryahan kooxeed”.
“Messi waa inuu is weydiiyaa, sababta uu u awoodi waayay inuu ku guuleysto Champions League muddo dheer”.
“Hogaamiye ahaan waa inaad isweydiisaa sababta aysan kooxda ugu guuleysan Champions League, Barcelona waxay heysataa koox aad u fiican, ma dhihi kartid Ivan Rakitić wuu xun yahay, ama Coutinho iyo Alba ayaa xun, ama xitaa ter Stegen waa goolhaye xun, Vidal ama Arthur Melo, waxaan qabaa in Messi uu sidoo kale mas’uul ka yahay waxa ka dhacaya Barcelona”.